IPizzeria Tre kronor | Tyelela uHultsfred
ekhaya » Yitya usele » Izimuncumuncu kunye neepizzerias » IPizzeria Tre kronor
IPizzeria eHultsfred elungileyo ecaleni kukaWillys.
Pizza, kebabs, gyros, isaladi kunye burger bakhonza apha. Inika ii-pizza ezilungileyo kakhulu, abasebenzi abanobuhlobo kunye nenkonzo ekhawulezayo.
Apha unokuhlala ngaphakathi kwe-pizzeria kwaye ehlotyeni kukho ithala elincinci langaphandle.
NgoMvulo: 11–22NgoLwesibini: 11-22NgoLwesithathu: 11-22NgoLwesine: 11-22NgoLwesihlanu: 11–22: 30NgoMgqibelo: 11-23NgeCawa: 11-22
Nytorpsvägen 1, 577 39 IHultfred, Sverige
141 uphononongo kuGoogle
Sa-odola ipitsa enesiqingatha nesiqingatha. Ndingatsho ukuba yayingengosiqingatha. Nangona kunjalo, iifry zazilungile kwaye enye ipitsa. Abasebenzi abahlobo
Kulunge kakhulu. Umgangatho omncinci kunye nepitsa eninzi. Inxalenye entle yokutyela.
Ukutya okuhle kakhulu kunye nabasebenzi abanobuhlobo
Ukutya okumnandi kunye nabasebenzi abanobuhlobo!
5/5 6 kwiinyanga ezidlulileyo
Ii-pizza ezilungileyo kakhulu, ezinobungakanani obukhulu kunye nenkonzo ekhawulezayo, le pizzeria ifumana iinkwenkwezi ezintlanu kum. Bafuna nje ukulungisa uphawu oluqinileyo kwi-facade yabo ukuze ufike ngokulula.